दीपकुमारको दिल्ली फिर्तीः यसकारण छ अस्वाभाविक - Pahilo News
दीपकुमारको दिल्ली फिर्तीः यसकारण छ अस्वाभाविक
२१ भदौ । बैशाखको तेस्रो साता सरकारले फिर्ता बोलाउँदा भारतस्थित नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायमाथि लागेको एउटा मुख्य आरोप थियो– तत्कालीन सरकार हटाएर नयाँ सरकार बनाउन दिल्लीमा सक्रिय रहेको । चार महिनापछि नयाँ सरकारले उनलाई त्यहीँ पठाउन सिफारिश गर्नुले दालमा कालो थियो भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
दीपकुमार उपाध्याय कुनै कुटनीतिज्ञ होइनन् र उनका लागि कुटनीति मुख्य क्षेत्र पनि होइन । कपिलवस्तुबाट चुनाव नहारेको भए उनी सुशील कोइरालाको पालामा मन्त्री हुने थिए । चुनावमा पराजय भएका कारण खाली के बस्नु भनेर उनी त्यही बेला उनी दिल्ली पुगेका थिए । त्यसरी दिल्ली पुग्नुमा कुटनीतिक कौशल देखाउनेभन्दा पनि पहिलादेखि त्यहाँका शक्ति केन्द्रहरुसँग रहेको सम्बन्धलाई बलियो बनाएर नेपाल फर्केपछि राजनीतिमा अझ बढी छलाङ मारुँला भन्ने भावनाले मुख्य काम गरेको थियो । नभएर पटक–पटक सांसद र मन्त्री भइसकेको नेता राजदूत भएर जान त्यति मरिहत्ते गर्दैन । जबकि, उनको राजनीति सकिएको पनि थिएन ।
राजदूत हुँदा दीपकुमार उपाध्यायले खास कुनै नराम्रो काम गरेका थिएनन् । नाकाबन्दीको बेला त्यस्तै थियो र, उनले सम्बन्ध सहज बनाउन कोसिस गरेका थिए । तर, जब बैशाख तेस्रो साता एकाएक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भ्रमण रोकियो, तब उनले त्यसमा प्रतिक्रिया जनाए र पहिलादेखि नै मौका कुरेर बसेको सरकारले उनलाई फिर्ता बोलायो । उनी नेपाल फर्किए र धेरै कुरामा मुख नखोलेर कुटनीतिक मर्यादा कायमै गरे । तर, नयाँ सरकार बन्नासाथ उनी फेरि त्यही आफूले छाडेर आएको दिल्ली नै जानुपर्ने के चाहिँ बाध्यता आइलाग्यो होला ?
कम्तीमा तीन कारणले दीपकुमार उपाध्यायको दिल्ली फिर्ती अस्वाभाविक छ ।
पहिलो, राजदूत पठाउने (सेन्डिङ) र ग्रहण गर्ने (होस्ट) दुबै मुलुकले पत्याउने व्यक्ति हुनुपर्छ । त्यही भएर राजदूत नियुक्त गर्दा अग्रिम स्वीकृति (एग्रिमो) दिने चलन छ । उपाध्यायलाई भारतबाट एग्रिमो ल्याउन त समस्या नहोला तर उनी जेसुकै कारणले भए पनि नेपालमा विवादित भइसकेका छन् र उनीप्रति सिंगो राष्ट्रको विश्वास छैन । संसद्मा एक तिहाईभन्दा बढी मत बोक्ने विपक्षी दल उनका विपक्षमा छन् । किनभने, हिजो उनीहरुले उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाएका थिए । संसदीय सुनुवाइका क्रममा विगत भइसकेका ती कुराहरु फेरि बल्झिनेछन् र त्यहाँ हुर्मत लिने गरी प्रश्नहरु उठ्नेछन् । त्यसैले यस्तो विवादित व्यक्ति त्यहीँ ठाउँमा जानु उपयुक्त हुँदैन ।
दोस्रो, सरकार भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त संस्था हो । हिजो त्यसको अगाडिको सिटमा केपी ओली थिए, आज पुष्पकमल दाहाल छन् र भोलि अरु कोही हुनेछन् । तर, यसको मतलब अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय पछिल्लो सरकारले उल्ट्याउँदै जाने हो भने राज्य वास्तवमा राज्य रहँदैन, अराजकतामा परिणत हुन्छ । जेसुकै कारणले भए पनि दीपकुमार उपाध्यायलाई नेपाल सरकारले फिर्ता बोलाएको हो, केपी ओलीले होइन । त्यसकारण राज्यले चार महिना पहिला गरेको निर्णय उल्ट्याएर त्यही मानिसलाई दिल्ली पठाउनु मर्यादाका दृष्टिले पनि ठीक हुँदैन ।
तेस्रो, दीपकुमार उपाध्यायमाथि जे आरोप लागेको थियो, त्यो पुष्टि भएको छ । तत्कालीन सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाउँदा एमाले–माओवादी नयाँ समीकरण भत्काएर माओवादी–कांग्रेस समीकरण बनाउनका लागि सक्रिय रहेको एउटा मुख्य गुनासो थियो । त्यतिबेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई उपचारका नाममा दिल्ली बोलाएर त्यहाँका उच्च अधिकारीहरुको रोहबरमा उपाध्यायले वार्ता गराएको र अख्तियारमा विचाराधीन महराको मुद्दासमेत किनारा लगाइदिएर वातावरण बनाएको बुझाइ तत्कालीन सरकारको थियो । अहिले नयाँ सरकार बन्ने बेलामा उपाध्यायको दिल्ली भ्रमण र हालै राजदूतका रुपमा उनको फेरि दिल्ली सिफारिशले त्यही कुरा पुष्टि गरेको छ ।
दीपकुमार उपाध्यायको दिल्ली फिर्तीमा कुटनीतिभन्दा राजनीतक बदलाको भावनाले काम गरेको छ । नेपाल सरकारले चार महिनाअघि फिर्ता बोलाएका उपाध्याय कसको बलमा र के कारणले फेरि दिल्ली जाँदैछन् ? स्वाभाविक प्रश्न उब्जिएको छ ।
किन पठाइँदैछ दिल्ली ?
दीपकुमार उपाध्यायलाई दिल्ली पठाउनुका पछाडि एमालेलाई भारतविरोधी देखाउने र किनारा लगाउने योजनाकै एक अंग भएको बुझाइ एमाले बृत्तमा छ । उनी दिल्ली फर्किंदा अघिल्लो सरकारले गलत काम गरेको थियो भन्ने पुष्टि नेपालकै तर्फबाट हुन्छ र त्यसको दोष एमालेको टाउकामा हाल्न सकिन्छ भन्ने योजना अनुसार उपाध्यायलाई राजदूत बनाउने योजना अघि सारिएको बुझिन्छ । एमालेका एक नेताले भने, ‘यतिका मुलुकमध्ये अन्यत्र जता पठाए पनि हुन्थ्यो । यो त हामीसँग जानाजना कन्फ्रन्टेसन (मुडभेड) मा जान खोज्ने योजना मात्र हो ।’